आजको राशिफल: बि. सं. २०७७ साल भदौ ४ गते बिहिबार तदानुसार इश्बी सन २०२० अगस्ट २० तारिख । – Butwal Sandesh
आजको राशिफल: बि. सं. २०७७ साल भदौ ४ गते बिहिबार तदानुसार इश्बी सन २०२० अगस्ट २० तारिख ।
आज अरुको कुरामा हत्त बिस्वास नगर्नु होला । नया काम को सुरुवात नगर्नु होला। राम्रो सँग सुनेर मात्रै जबाफ दिनु होला। स्वास्थ्यमा बिशेष ख्याल राख्नु होला । बोलिमा बिशेस साबधानि अपनउनु होला। आजको शुभ अंक १,८ र १० रहेको छ।
कठिन परिश्रम गर्नु पर्ने छ। त*नाब बड्ने छ। झैझ’गडाबाट टाढै बस्नु बुद्धिमानी हुनेछ । नया काम को सुरुवात नगर्नु होला। पारिवारिक वि*वाद हुन सक्छ। बोलीको विपरीत अर्थ लाग्न सक्छ। आजको शुभ अंक २,७ र १२ रहेको छ।
समाजमा सम्मानित हुँने योग रहेकोछ ।मन मा सन्तुष्टि रहने छ। सहयोगी हातहरू अघि बढ्नेछन् । बोलि ले साथ दिने छ। दाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ। धन लाभ को योग छ। आजको शुभ अंक ३ र ६ रहेको छ।
पठन–पाठनमा प्रगति हुनेछ।मन ले सोचेको पुग्ने छ। पारिवारिक जीवनमा समझदारी बढ्ने योग छ। आटेको काम पुरा हुनेछ। लगानि बाट सन्तु्ष्ट लाभ मिल्ने छ।सम्मानित हुँने योग रहेकोछ । आजको शुभ अंक २ र ४ रहेको छ।
मन मा सन्तुष्टि रहने छ।आयआर्जन बढ्ने छ ।पठन–पाठनमा जोड दिनुहोला। जस मिल्ने योग छ।नया कामको सुरुवात गर्न सक्नु हुन्छ। आजको शुभ अंक १ र ५ रहेको छ।
सामाजिक रुपमा अपजस आउन सक्छ। पारिवारिक जीवनमा समझदारी बढ्ने योग छ। काम बिग्रिन सक्छ। नया काम को थालनि न गरेकै बेस। सोचेर बोल्नु होला।
पारिवारिक जीवनमा समझदारी बढ्ने योग छ।पठन–पाठनमा प्रगति हुनेछ।आटेको काम पुरा हुनेछ। बोलि ले साथ दिने छ।आज तपाइको घा’तक बार रहेको छ त्यसैले नया काम को सुरुवात नगर्नु होला। आजको शुभ अंक २ ७ र १२ रहेको छ।
आटेको काम पुरा हुनेछ। लगानि बाट सन्तु्ष्ट लाभ मिल्ने छ। समाजमा सम्मानित हुँने योग रहेकोछ ।मन मा सन्तुष्टि रहने छ। आजको शुभ अंक १,८ र १० रहेको छ।
शारिरिक र मानसिक मजबुति मिल्ने छ। बोलि ले साथ दिने छ। जस मिल्ने योग छ। नया काम को सुरुवात महिला मित्र बाट गराउदा राम्रो हुनेछ। आजको शुभ अंक ४,९ र १२ रहेको छ।
सफलता को लागि हतार नगर्नु होला।राम्रो सँग सुनेर मात्रै जबाफ दिनु होला। बोलिमा बिशेस साबधानि अपनउनु होला। आजको शुभ अंक १० ,११ र ७ रहेको छ।
आय बढ्ने छ। लगानि बाट सन्तु्ष्ट लाभ मिल्ने छ।माया प्रेमको बन्धन कसिलो हुँनुको साथै पति पत्निबिचको सम्बन्धमा थप सुमधुरता बढेर जानेछ ।बोलिमा बिशेस साबधानि अपनउनु होला। आजको शुभ अंक १० ,११ र ७ रहेको छ।
माया प्रेमको बन्धन कसिलो हुँनुको साथै पति पत्निबिचको सम्बन्धमा थप सुमधुरता बढेर जानेछ । नया काम को सुरुवात गर्दा राम्रो हुनेछ। आजको शुभ अंक ४ ९ र १२ रहेको छ।